Xoogag Jihaadi ah oo Shaqaale Shiinays ah ka qafaashay dalka Maali.
Sunday July 18, 2021 - 12:51:33 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda Afrika ayaa sheegaya in xoogag jihaadi ah ay qafaasheen shaqaale ajaanib ah xilli ay ku sugnaayeen dalka Maali.
Sedax qof Shiinays ah iyo laba ruux oo udhashay dalka Muritaaniya ayaa shalay laga qafaashay deegaan dhaca Koonfur galbeed ee dalka Maali.
Sida lagu xaqiijiyay war rasmi ah oo kasoo baxay melleteriga Maali shaqaalaha Shiinayska ah ee laqafaashay ayaa ka shaqeynayay mashruuc dhisma ah oo kuyaal deegaan 55Km ujira degmada Kuwaala.
Xoogagga weerarka afduunka ah geystay ayaa la sheegay in ay wateen mootooyin dhugdhugleey ah kadibna waxay ku baxsadeen gaadiid yaryar oo nuuc raaxada ah iyagoo horay usii kaxaystay lahaystayaashii ay qafaasheen.
Wararka ayaa intaas ku daraya in weeraryahannadu ay burburiyeen agabyo ay laheyd shirkadda shiinayska ah ee loo yaqaan Covec iyo shirkadda Muritaaniya ee ATTM sida lagu xaqiijiyay bayaanka kasoo baxay Melleteriga Maali.
Mas'uul diiday in magaciisa lasoo xigto ayaa yiri "laheystayaasha laqafaashay waxay ka shaqeynayeen dhismaha waddo muhiim ah, waxa kaliya ee aan muhiimadda siinayno ayaa ah in shaqaalaha lasoo badbaadiyo".
inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas'uuliyadda afduubkan hadane waxaa lagu eedaynayaa in ay ka dambeeyeen dagaalyahannada Jamaacada Ugargaaridda Islaamka iyo Muslimiinta ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan JNIM.
Ku dhowaad 100 ruux oo ku dhintay Roobab ka da'ay dalka Hindiya.
Maleeshiyaad Amxaara ah oo sarkaal iyo carruur ka qafaashay dalka Suudaan.
80 ruux oo ku dhintay roobab dabayllo wata oo ku dhuftay dalka Jarmalka.
Nin Caddaan ah oo weerar isku day dil ah ku qaaday Muslimiin ku sugan dalka Canada.
Dad Shiinays ah oo ku dhintay qarax ka dhacay dalka Pakistan.
Dad Soomaali ah oo ku dhintay Rabshadaha ka socda dalka Koonfur Afrika.
Cudurka Corona Virus oo boqolaal qof ku dilay dalka Tuunis.
Qarax ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Bariga dalka Suudaan.